Peugeot 807 - isizukulwane sesibili evenini umndeni French
Peugeot 807 wazalwa ngo-2003, esikhundleni odlule imodeli evenini Peugeot 806 esithuthukiswe ngokuhlanganyela onjiniyela Citroen futhi Fiat, imoto kubonakala zonke nalo esikhathini esidlule izingxenye isizukulwane. Futhi, lolu modeli ifaniswe kunakwe namaphutha amaphutha onjiniyela wenza uma udala isizukulwane sokuqala French izimoto nomndeni.
Peugeot 807 futhi kuba ngokuphelele ezifanayo izici lobuchwepheshe izimoto Citroen C8, Fiat Ulysse futhi Lancia Pfedra sasizazisa hhayi kuphela abalandeli, kodwa futhi ngochwepheshe. Ngemva kokuchitha omningi eziyizinhlupheko ukuhlolwa, abacwaningi ngazwi linye wamemezela ukuthi imoto - the best in izimfanelo zalo evikela bonke ontanga. Lokhu imoto evenini nomndeni kuqala, uthole ukunconywa. Le modeli ifakwe "intelligence", okuyinto akabakhohlwa ukukhumbuza abagibeli izihlalo eziphambili ezidinga ukubophela esihlalweni sakho amabhande.
Peugeot 807 kwaba omkhulu kakhulu ukuhlolwa kanye umise ngokwaso njengoba imoto ivikela kahle abebephakathi kusuka uhlevane, awela ohlangothini. Nasi wafingqa onjiniyela ukuhlela phambi: ucwaningo luye lwabonisa ukuthi uma ukushaya phambi umshini ukulimala kungenzeka umshayeli kanye phambi kwesihlalo umgibeli. Lapho engozini ebandakanya ingakenzeki Ingxenye okusezingeni eliphezulu yokulimala. onjiniyela Iqembu nishilo ukuthi kuzothatha ku-akhawunti uma udala imodeli esilandelayo.
Le modeli Peugeot 807 kwavela izinguqulo ezimbili: i-amane futhi ngendlu ezinhlanu. Umthengi ungaphuma uhlobo umzimba "jikelele" noma vula amehlo sethu sengqondo evenini. Izihlalo nazo azifani. Umnikazi ungakwazi ukufaka ku gumbi zonke 8 izihlalo, noma imali ezincane. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukuthenga itafula ukuthi izophelelisa ukhululekile ngesikhathi uhambo olude. It njengenye indlela, ingafakwa phakathi izihlalo lomugqa wesibili nowesithathu.
Peugeot 807 ifakwe izinhlobo ezahlukene izinjini. Abashayeli Ungakhetha noma yiliphi kwezinhlobo ezingu-12. Ngesikhathi esifanayo kukhona kukhethwa gearbox ngokuzenzekelayo noma mathupha. Emincane kakhulu usayizi injini yemoto, eyakhishwa emgqeni inhlangano ngo-2005. Usayizi uthi 1904 cubic amasentimitha futhi unegama romantic Esplanade 2.0. "Inhliziyo" enamandla kakhulu babe amamodeli badedelwa ngasekupheleni kuka-2002. Ukuze okuvula, imininingwane eyethulwa etafuleni.
Engine Ukucaciswa Peugeot 807
Ivolumu cm. Cube.
3.0 205 Platinum
3.0 V6 205 Platinum
3.0 V6 Platinum
3.0 V6 Platinum Pullman Avtomatik
I speed esiphezulu angakhula imodeli imoto 205 km / h.
ukulawula elula, Lithatha induduzo, ukuphepha ngokuphelele futhi ukulawula inani phezu komgwaqo - lena main, kodwa akuzona zonke izinzuzo Peugeot 807. Impendulo ngalokhu imoto egcwele injabulo kanye benamandla imizwa kuphela omuhle. Elektrodveri, imishini kakhulu (GSM, Webasto, isilawuli sezwi, ezihlukahlukene izinzwa, njll), ubungqabavu, ukusebenza kahle futhi roominess - yilokhu edonsela eziningi abathengi e evenini umndeni.
Inzwa umoya-mpilo. Incazelo. aphoyintimenti
Indlela ukukhetha amathayi ebusika? Amathiphu ambalwa
Kanjani ukuqala imoto ngaphandle ukhiye wedwa
Izici zobuciko "Hyundai AH35" - inkimbinkimbi yaseCorea
Uhlambulule Imibhobho esemzimbeni: izithasiselo, kumakhemikhali awuketshezi noma ultrasound
Ukuvuvukala izinto ezihlobene
Ukwahlukanisa amaphrojekthi. Incazelo kanye ngezigaba amaphrojekthi
Imishini Kuqondile: ezibekiweko lobuchwepheshe kanye namathiphu ngokukhetha
Kostroma Museum: incazelo, isithombe
Lake Tanganyika (Africa) - a fresh samanzi esiyingqayizivele
I impi yabashokobezi yokufuna e 1812 ekulweni impi sikaNapoleon
Lake Kaban - oyimfihlakalo Kazan Luhambo
Salad nge ushizi - esiphundu uswidi
Related party kuthengiselana - Iyini?
Isilinganiselwa vodkas 2015
Izinga Natural sabantu abangasebenzi